Madaxweyne Siilaanyo Oo Magcaabay Xilal Cusub | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN)Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud, ayaa maanta soo saaray laba xeer oo uu ku kala magacaabay labadan masuul ee hoos ku xusan, kuwaasi oo kala qaban doona Chief of Cabinet-ka Madaxtooyada iyo Af-hayeenka Madaxtooyada Somaliland.
1. Mudane, Xirsi Cali X. Xassan oo uu u magacaabay inuu noqdo Chief of Cabinet-ka Madaxtooyada. C/laahi Cukuse, wuxuu ahaa mulkiilaha wargeyska saxansaxo ee kasoo baxa Hargeysa, isla markaana wuxuu waqtigan ahaa gudoomiyaha dalada suxufiyiinta, wuxuu xilal ku xigeen wasiir kasoo qabtay dawladii Madaxweyne Cigaal
2. Mudane, Cabdillaahi Maxamed Daahir (Cukuse) oo uu u magacaabay inuu noqdo Af-hayeenka Madaxtooyada. Xirsi wuxuu ahaa gudoomiye xigeenkii Komishankii hore , wuxuuna xilkaa iska casilay. ka hor intii aan la gelin hawshii diiwaan gelinta.
Maamulka Xafiiska Madaxweynaha JSL